बाँच्ने रहर पटक्कै छैन धर्ति छोड्ने हतारमा छु !!
स्वर्ग जानुपर्ने हो वा नर्क असाध्यै दोधारमा छु !!
थाहा भए ठेगाना बताइदेऊ न साथि……..
म…. भगवानलाई पत्र लेख्ने तरखरमा छु !!
फोटो : Bishesh Subedi
Next फोहोरको मारमा भूमिगत सेती नदी
मुक्तक ब्लग says: